जाडो र गर्मी : एउटै मौसम तर कसैलाई कम, कसैलाई बेसी किन लाग्छ ? – Smartkarnalinews
सोमवार, मंसिर ३०, २०७६ 9:40:20 AM	मा प्रकाशित
उनको बालसुलभ प्रश्नको ठोस उत्तर मसँग थिएन । त्यसैले फिस्स हाँसेर टारिदिए ।सत्य कुरा चाहिँ के हो भने जाडो सबैलाई लाग्ने गर्छ । कुरा कम बेसी मात्राको मात्रै हो ।हो, एउटै वातावरणमा पनि कसैलाई कम जाडो लाग्ने, कसैलाई बेसी जाडो लाग्ने चाहिँ अवश्य हुन्छ । यस्तो किन हुन्छ त ? आउनुहोस्, जाडोको बारेमा केही चर्चा गरौं ।
घरको तापक्रम सुनिश्चित गरिबस्ने एयर कन्डिसनर, हिटर जस्ता चीजहरु विग्रियो भने बनाउनको लागि हामी मेकानिक बोलाउने गर्छौं । ठीक त्यसै गरी, तपाईंले अनावश्यक रुपमा र बिनाकारण चिसो महसूस गरिरहनुभएको छ भने सबैभन्दा जरुरी कुरा चिकित्सकसँग सल्लाह गरिहाल्नुपर्छ । त्यसो गर्दा तपाईंको शारीरिक अवस्था ठीक रहे नरहेको तथा शरीरको तापक्रम ठीक अवस्थामा राख्ने प्रणालीले सही ढंगले काम गरे नगरेको पहिचान गर्न सकिन्छ । ratopati.com
प्रकाशित मितिः सोमवार, मंसिर ३०, २०७६ 9:40:20 AM